Komishanka Doorashooyinka oo soo Gunaanaday Diwaangelintii ugu Ballaadhnayd ee Somaliland Laga Qabto | Togdheer News Network
Komishanka Doorashooyinka oo soo Gunaanaday Diwaangelintii ugu Ballaadhnayd ee Somaliland Laga Qabto
Hargeysa (Togdhnews)- Guddida Doorashooyinka Qaranka Jamhuuriyadda Somaliland, ayaa xaflad ballaadhan ku soo gabogabeeyay diiwaangelinta codbixiyeyaasha doorashooyinka oo gobollada dalka ka socotay muddo 9 bilood ah.
Xaflad Komishanku ku soo gunaanadka diiwaangelinta codbixiyeyaasha oo lagu qabtay hudheelka Maansoor ee magaalada Hargeysa shalay, waxa ka qaybgalay Madaxweynaha Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo), madaxda xisbiyada qaranka, wasiirro, Shirguddoonka Golaha Wakiillada, qaadhaan-bixiyeyaasha ka taageera doorashooyinka iyo marti-sharaf kale.
Afhayeenka Guddida Doorashooyinka Md. Siciid Cali Muuse oo ugu horreyn halkaas ka hadlay, ayaa sheegay in diiwaangelinta codbixiyeyaasha oo Gobolka Togdheer ka bilaabantay 16-kii bishii January ee sannadkan 2016 la soo gebagebeeyey 20-kii bishan September.
Afhayeenku wuxuu sheegay in diiwaangelintani ahayd tii ugu horreysay ee caalamka oo dhan loo adeegsaday in codbixiyeyaasha indhaha laga sawiro, halkii faraha laga qaadi jiray, nidaamkaasi oo lagaga hortagayo in doorashooyinka lagu noqnoqdo.
“Diwaangelinta hawl adag baa naga qabsatay, laakiin waa Ilaahay mahaddii haddaynu gebagebadii joogno. Goobaha diiwaangelinta laga qabtay waxa imanayey dad sita kiishash oo dadka is-diwaangeliya ka qaadayey waraaqaha diwaangelinta, taasoo sharci-darro ah, waayo waxa la doonayaa in qofku keligii goobta codbixinta yimaad.”
Afhayeenka Guddida Doorashooyinka Qaranka waxa uu mahadnaqay cid kasta oo gacan ka geysatay hirgelinta diiwaangelinta, sida Madaxweynaha, ciidammada, shirkadaha isgaadhsiinta, komishankii hore iyo Wasaaradda Arrimaha Gudaha.
Diiwaangelinta codbixiyeyaasha ee la soo gunaanaday oo ah tii ugu ballaadhnayd ee Somaliland ka dhacda, waxana ka qayb-galay shaqaale ka badan 15,000 kun, 2,000 (labaatan kun) oo baabuur, “Markaa diiwaangelinta waxa looga jeedaa in la helo doorasho xor iyo xalaal ah, waayo waxa lagu jaan-goynayaa waraaqaha codbixinta ee goobaha la geynayo,” ayuu yidhi Siciid Cali Muuse.
Cabdifataax Ibraahim Sheekh oo ka mid ah xubnaha Guddida Doorashooyinka oo munaasibaddaas hadal dheer ka jeediyey, ayaa waxa uu yidhi; “Diiwaangelintii ma soo xidhmin, oo waxa hadhay kala-hufiddii iyo in kaadhadhkii codbixiyeyaasha la sameeyo.”
Geesta kale, Guddoomiye-ku-xigeenka 1aad ee Golaha Wakiillada Somaliland Md. Baashe Maxamed Faarax oo halkaas ka hadlay, ayaa sheegay in wadahadallada xukuumaddu la furtay kooxda Khaatumo iyo beelaha Sool dega ay qayb libaax ka qaadatay in diiwaangelintu si wanaagsan uga dhacdo gobolkaasi.
“Diiwaangelintani waxay mideysay Somaliland, markaa haddii Alle yidhaahdo doorasho wanaagsanna way inoo dhacaysaa.” Sidaana waxa yidhi Guddoomiyaha Xisbiga UCID Eng. Faysal Cali-waraabe, isagoo ku taliyey in laga wada-tashado sidii Somaliland uga maarmi lahayd qaadhaan-bixiyeyaasha ka taageera doorashooyinka oo ay keligeed isku dabbari lahayd.
Guddoomiyaha Xisbiga WADDANI Md. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro) ayaa yidhi; “Waa maalin ku suntanaan doonta taariikhda Somaliland. Maanta diiwaangelin baa inoo dhammaystirantay oo aynu u xafladeynaynaa in si wanaagsan ay innoogu dhammaatay diiwaangelintaasi, markaa waa guul u soo hoyatay Somaliland oo aynu muddo ka dhur-sugeynay. Waxaan hambalyeynayaa dhammaan qaranka Somaliland, waxa aan hambalyeynayaa Guddida Doorashooyinka Qaranka oo lafdhabar u ahaa hawshaas. Waxa kaloon hambalyeynayaa cid kasta oo haddii ay dhaqaale tahay iyo hadday farsamo tahay ba ku biirisay si ay arrintaasi u guulaysato oo ay ugu horreeyaan Qaadhaan-bixiyeyaasha iyo xukuumadda Somaliland iyo cid kasta oo gacan ka geysatay ba.”
“Qaadhaan bixiyeyaasha, runtii waan u mahad-naqayaa waxaanse leeyahay hawshii weli may dhammaan, xukuumadda Somaliland na hawsha intii loogu tallo-galay in ka badan bay bixisay, marka waxa iyaga laftooda looga baahan yahay in aanay hawsha halkii kaga hadhin ee ay dhammaystirkeeda hadday doorashada iyo diiwaangelinta tahayba gacantii ay ku lahaayeen sii waddo,” ayuu yidhi Md. Cirro.
Guddoomiyaha xisbiga KULMIYE Md. Muuse Biixi Cabdi, ayaa isaguna u mahadnaqay Komishanka Doorashooyinka Qaranka, waxaannu yidhi; “Haddii doorashada xisbiyadu dabada jiidaan waxa laga yaabaa inay dhibaato innagu timaad. Qaadhaan-bixiyeyaasha iyo cid kasta oo kaleba waxaannu leenahay doorashadu xilligeedii ha dhacdo.”
Guddoomiyaha Komishanka Doorashooyinka Qaranka Eng. Cabdiqaadir Iimaan Warsame, ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin in diwaangelinta codbixiyeyaashu si nabadgelyo ah oo qurux badan uga qabsoontay gobollada dalka oo dhan.
“Diiwaangelinta aynu joogno xidhitaankeedii waxay inoo saamaxday in lagu tartamo nidaam xalaal ah, la xisaabtan leh, isla markaana ka fayow musuqmaasuq. Waxaannu xisbiyada iyo bulshada ugu baaqeynaa inay nidaamkaas wada ilaaliyaan, oo aynu wada ilaashanno,” ayuu yidhi Guddoomiye Iimaan.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) oo gunaanadkii xafladda khudbad dheer ka jeediyey, ayaa waxa uu yidhi; “Gunaanadka iyo dhammaystirka mashruuca diiwaangelinta codbixiyayaashu waa gallad Eebbe iyo guul u soo hoyatay guud ahaan qaranka Somaliland. Waa guul u soo hoyatay geeddi-socodka dimoqraadiyadda iyo hannaanka doorashooyinka xorta ah ee ka tisqaaday geyigeenna hooyo. Waa guul u soo hoyatay xisbiyada iyo Guddida Doorashooyinka Qaranka. Waa guul ay xaqiijisay xukuumadda aan gadh-wadeenka ka ahay. Ugu horreyn, waxaan hambalyo iyo bogaadin u jeedinayaa ciidammada kala duwan ee qaranka doorkii iyo dedaalkii ay ku lahaayeen taabbo-gelinta diiwaangelinta. Marka labaad, waxaan ku hambalyeynayaa shacbi-weynaha Somaliland sidii xil-kasnimada, xammaasadda iyo xasilloonida lahayd ee ay uga qayb-qaateen diiwaangelintii dalka ka dhacday.”
“Arrintani waxay daaha ka rogtay bisaylka iyo baraaruga bulshada Somaliland. Waxay ka markhaati kacday in ay Somaliland tahay dal madaxbannaan oo horumar weyn ka sameeyey nabadgelyada, dimoqraadiyadda iyo hannaanka doorashooyinka xisbiyada badan, taas oo aan ka tisqaadin in badan oo ka mid ah qaaradda Afrika.
Dhinaca kale, waxaan uga mahadcelinayaa Guddida Doorashooyinka Qaranka sidii ay mashruucan uga midho-dhaliyeen. Sidoo kale, waxaan uga mahadnaqayaa dalalka deeq-bixiyayaasha aynu saaxiibka nahay ee UK, iyo EU (Midowga Yurub) taageeradii ay innaga siiyeen diiwaangelinta codbixiyayaasha,” ayuu yidhi Madaxweynaha Somaliland.